August 2015 - Myanmar News Plus
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ….ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ”“ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္းညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယအိမ်ထောင်ကျတော့ရော…”“ဒုတိယယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေးက မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပဲ ရှေ့တန်းထွက်သွားတာ၊ ပြန်မလာတော့ဘူးလေ” “အော်… နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ရော… မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ ကွဲသွားပြန်တာလား”“ခုထိ ပေါင်းနေပါသေးတယ် ကွယ်” “ဒါ… ဒါဆို ဘယ်လိုဖြစ်လို့ … ““သူက… ဖေ့စ်ဘုတ်ခရေဇီလေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကတည်းက ညဘက် ညဘက် မအိပ်တန်း ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲချည်းပဲ ဝင်နေတာ၊ ခုထိ မမ အလှည့် မရောက်သေးဘူးကွယ်” “ဂျာ… […]
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အရည်မပျော်တဲ့ ရေခဲမုန့်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အရည်မပျော်တဲ့ ရေခဲမုန့် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ အနောက်တိုင်းဒေသ တွေအတွက်တော့ နွေရာသီမှာ စားသုံး ဖို့ အဆင်ပြေသွားတဲ့ ရေခဲမုန့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို အရည်မပျော်တဲ့ ရေခဲမုန့် တွေကို ၀ယ်ယူစားသုံးဖို့ Alton Towers အမှတ်တံဆိပ် ရေခဲမုန့် ရောင်းတဲ့ကား တွေမှာ ပထမ ဆုံး လာရောင်တန်းစီ သူ အယောက် ၅၀ ကိုလည်း တစ်ခုစီ အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Alton Towers Resort က ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု တစ်ခုအရ ဗြိတိန် နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေ ရဲ့ ထက်ဝက်ခန့်ဟာ ရေခဲမုန့် တစ်ခု စားသုံးတဲ့အခါ ကုန်သွားအောင် စားလို့ မရကြပါဘူး။ […]
အိမ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အ၀လွန်ရောဂါ ဖြစ်လာစေနိုင်
နောက်ဆုံးပေါ် အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပန်းကန်ဆေးစက် ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် ၊ အ၀တ်လျှော်စက် ၊ ဖုန်စုပ်စက် နဲ့ အခြား အိမ်အလုပ်ကူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာစေတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း ထို အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ပိုဝလာစေနိုင်ပါတယ်။ သုတေသီတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာကတော့ အိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် အချိန်များစွာ သက်သာသွားစေတာဟာ အိမ်ရှင်မတွေကို အ၀လွန်ရောဂါ ဆီကို တွန်းပို့ပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ ဗြိတိန် လူမျိုးတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော်က ဘ၀ တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတာ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အလုပ်မှာ အချိန်ပို ကုန်ဆုံးလာကြပြီး အိမ်အလုပ်လုပ်ဖို့ အချိန် မရှိကြတော့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ […]
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက်၊ နေထိုင်မှုစံနစ်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ အစား အသောက်ပုံစံလည်း ပြောင်းလဲ လို့ လာနေပါပြီ။ မည်သို့ ပင် ပြောင်းလဲစေကာမူ၊ မပြောင်းလဲတာ တစ်ခု ကတော့ ပဲပြုတ်စားသုံးသောယဉ်ကျေးမှုလေးပါ။ ဘိုးဘွားဘီဘင် လက်ထက်မှစ၍ ယနေ့ ထက် တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ ရွာတိုင်းဒေသအသီးသီးမှာ “ဟောဒီက ပဲပြုတ်” ဆိုသော နံက်ချိန်ခါ တေးသံသာကို ကြားရစမြဲပါ။ ပဲပြုတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ထမင်းပူပူမှာဆီဆမ်းဆားဖြူး၍လည်းကောင်း၊ ထမင်းကြော် အဖြစ် တစ်ဖုံ၊ နံပြား/အီကြာကွေး ဖြင့်တွဲဖက်ကာ နံက်စာအဆာပြေအဖြစ် လူကြီး/လူငယ်မရွေး၊ လူမျိုးဘာ သာမရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ခုံခုံမင်မင်စားသုံးနေကြတာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ပဲပြုတ်သုပ်၊ ပဲပြုတ်ကြော် ဟင်းလျာများအဖြစ်စားသုံးနိုင်သလို၊ ပဲပြုတ်ကိုမျှစ်ဖြင့်ရောကြော်ကာ၊ အရသာရှိရှိ စား သုံးလေ့ရှိကြ၏။ ထို့ပြင် […]
လက်တွဲရန်မသင့်သော ယောက်ျားညံ့ (၁၀ မျိုး)
၁။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး နောက်ကွယ်ကျ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောက်ျား ၂။ ပျင်းမှဖုန်းဆက် သူစိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆို အဖတ်မလုပ် ရှိတယ်လို့တောင်မထင်တဲ့ယောက်ျား ၃ ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူချင်စိတ်မရှိသောယောက်ျား ၄။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ သိက္ခာကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ ယုတ်ညဲ့စွာ ပြောဆိုတတ်သောယောက်ျား ၅။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပျော်တော်ဆက်တစ်ယောက်လို သဘောထားတတ်သောယောက်ျား ၆။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရန်ဖြစ်လျှင် လက်ပါတတ်သောယောက်ျား ၇။ ကိုယ့်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဘဲကြည့်ပြီး မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုဘယ်တော့မှ မငှဲ့ကွက်တတ်သောယောက်ျား ၈။ ကတိမတည်သောယောက်ျား ၉။ ဘဝအိပ်မက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်မရှိသောယောက်ျား ၁၀။ ပြဿနာတစ်ခုကို ခေါင်းရှောင်တတ်သောယောက်ျား…….. ထိုကဲ့သို့သော ယောက်ျားမျိုးတို့ကို ပျိုမေများ ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ ဘဝကိုတိုးတက်စေမည့်စာစုလေးများ
ရှေးအခါက ရသေ့၊ ရဟန်းအပေါင်းတို့သည် ကြက်သွန်ဖြူကို အမြတ်ဆုံးသောရသာရနဆေးအဖြစ် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ကြ၏။ အာယုဗ္ဗေဒဆေးအဖြစ် နည်းမျိုးမျိုးနှင့် ရှေးဆရာကြီးတို့သည် ကြက်သွန်ဖြူ၏ ဂုဏ်သတ္တိကို အမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ အချို့ဆရာတို့သည် ကြက်သွန်နီထက် ကြက်သွန်ဖြူက ဂုဏ်သတ္တိသာလွန်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကြက်သွန်ဖြူသည် သွေးကိုသန့်စေ၏၊ ပိုးသေ၏၊ လေသက်၏၊ ဖျားနာ၊ အရေပြားရောဂါကို ပျောက်စေ၏၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ သုတ်ပွားခြင်း ဖြစ်စေ၏၊ ဆီးဝမ်းကိုရွှင်စေ၏၊ ကာမကိုအားပေး၏၊ မျက်စိကိုအကျိုးပြု၏၊ အသက်ရှည်၏။ သွေးတိုးရောဂါကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သူရဲကောင်းကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးက မိမိ၏သွေးတိုးရောဂါသည် ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းရသည်ဟု ဆိုထား၏။ ချောင်းဆိုးရောဂါသည် ကြက်သွန်ဖြူကို နာတာရှည်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါအတွက် အရည်ပြု၍တိုက်ပါ၊ ကျွေးပါ၊ အလွန်ထင်ရှားသော အိမ်သုံးဆေးဖြစ်သည်။ လေရောဂါသည် ကြက်သွန်ဖြူကို နှမ်းဆီနှင့်စိမ်၍ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ထမင်းမစားမီ စားပါ။ […]
သင်တွဲနေတဲ့ချစ်သူဟာ သင့်စိတ်တူကိုယ်တူ လက်တွဲဖော်စစ်စစ် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ဒီအချက်ကလေးတွေက ပြောပြပေးနိုင်
သင့်လက်ရှိချစ်သူဟာ သင့်ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူ ဟုတ်ရဲ့လား။ သင်လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်အစစ် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူဘာတွေ တွေးနေတယ်ဆိုတာ သိကြတယ်။ ၂။ သူသာမရှိရင်ဆိုပြီး တွေးတောင်မတွေးကြည့်ချင်ဘူး။ ၃။ အားသစ်အင်သစ်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်အောင် သူတို့က တစ်ဖက်တစ်လမ်းက တွန်းအားပေးနေတတ်တယ်။ ၄။ ကိုယ်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန် ပြန်တည်ငြိမ်သွားအောင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေရင် ကိုယ့်ကို သက်သာသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာ သူသိတယ်။ ၅။နှစ်တွေကြာလာသည့်တိုင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရိုးသွားတာမျိုး မရှိပဲ အချစ်တွေသာ တိုးလာတယ်။ ၆။သူနဲ့အတူ ရှိနေချိန်တွေမှာ သင်ဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အဆင်ပြေပြေအမြဲရှိတယ်။ ၇။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခွဲခွာနေချိန်တွေမှာ ရရင်ရသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဂရုစိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာ အတွေ့အကြုံကို တစ်ယောက်က သေချာနားထောင်ပေးတယ်။ ၈။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိလာချစ်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးလို့ အမြဲခံစားရတယ်။ […]
Item Name ——— Lapoot (ကင်ပွန်းချဉ်)Category ———— Raw MaterialBotany Term ——– Acacia concinna DCSpecies Family —– Mimosaceae မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ ပေါက်ရောက်ပြီး အမြဲစိမ်းသစ်တောများ၌ အများဆုံး တွေ့ရသည်။ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ ♥ အပင် ဆူးရှိသောချုံပင်မျိုးဖြစ်၏ ။ ပင်စည်ပျော့၏ ။ အစိမ်းရောင် အခက်များပေါ်တွင် နီမှိုင်းသော အစင်းများ ရှိပြီး သေးငယ်သော အဖြူစက်ကလေးများ ဖုံးအုပ်နေသည်။ ♥ အရွက် နှစ်ခါ ငှက်မွေးရွက်ပေါင်း ဖြစ်သည်။ ၄-၆ လက်မရှည်၍ ရွက်ကလေး ၄-၆ စုံရှိသည်။ ရွက်မြွှာအစုံ ၁၂-၂၀ ရှိသည်။ ရွက်မြွှာများ ရှည်မျောမျောပုံဖြစ်သည်။ ရွက်ရင်း ရွဲ့စောင်းပြီး ရွက်ထိပ်ပိုင်း […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ ကို မုန့် များများ ကျွေးဖို့လို
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲကို အစာအိမ်ကနေ အရောက်သွားပါ လို့ ဆိုကြပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ ရှိမှုတစ်ခုအရ ဒီစကားဟာ မိန်းကလေးတွေကို လည်း ရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘာမှမစားရသေးတဲ့အချိန်ထက် ဗိုက်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ အချစ်ရေးကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးအစားမတူတဲ့ ပုံရိပ်တွေအများအပြား ကြည့်ခိုင်းနေစဉ်မှာ ဦးနှောက်ကို စကင်ဖတ်ကြည့်ခဲ့ရာ မိန်းကလေးတွေဟာ အစာ မစားရသေးခင်အချိန်ထက် စားပြီးအချိန်မှာ ချစ်ရေးချစ်ရာပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကို တုံ့ ပြန်မှု သိသိသာသာ ပိုများကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဒရက်ဆဲတက္ကသိုလ်နဲ့ ပင်ဆာဗေးနီးယားတက္ကသိုလ် တို့ က သုတေသနပညာရှင်တွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ အစားလျှော့မစားဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကော၊ လျှော့စားဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေပါ ချစ်ကြည်နူးစရာဓာတ်ပုံတွေကို တုံ့ ပြန်မှုအပိုင်းမှာ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်ပိုင်းကနေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်း လွှင့်မှုတွေ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုက်ဆာနေချိန်ထက် […]
အူမကြီးကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် ဆေးဝါးလက်နက်အသစ်
ဘယ်ရီအချဉ်သီးအနီရောင်ဟာ အူမကြီးကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသုတေသနပညာရှင်တွေက တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ရီအချဉ်သီးအနီရောင်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အမှုန့် ကို အူမကြီးကင်ဆာရှိတဲ့ အစမ်းသပ်ခံကြွက်တွေကို ကျွေးခဲ့ရာမှာ အကြိတ်အသားပိုတွေရဲ့ အရွယ်အစားကို ကျုံ့ သွားအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပြီး အသားပိုပမာဏကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင် ကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတင် တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း ၁၆၂၀၀ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးနေရပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဒီရောဂါကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့သေဆုံးသူဦးရေပေါင်း ၆၉၄၀၀ ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ရီအချဉ်သီးအနီရောင်ကထုတ်ယူတဲ့ အမှုန့် မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ အူအတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သတ်ပေးနိုင်ကြောင်း အရင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ တွေ့ ရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုသုတေသနလေ့လာမှုမှာ သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ အူမရောင်ရမ်းမှုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါရကြွက်တွေရဲ့ နေ […]